AKHRISO: Midowga Afrika oo ku dhawaaqay 6 qodob oo kuwajahan Xaaladda Kenya & Soomaaliya.
ADDIS ABABA(P-TIMES) – Gollaha Nabadda & Ammaanka ee Midowga Afrika oo shalay maya ugu codeeyey in ay dhexdhexaadiyaan Soomaaliya iyo Kenya, dacwadda Baddana lagu soo celiyo gudaha AFrika, ayaa haddana soo jeediyey magacaabida Ergay gaar ah oo ka shaqeynaya dhexdhexaadinta labada dal ee Kenya iyoSoomaaliya, kaas oo howshiisu tahay arrimaha Badda uun.
Warsidaha Puntlandtimes wuxuu helay Nuqul kamid ah nuquladii kasoo baxay Shirkii golaha Nabadda iyo Ammaanka Midowga Afrika, oo ay ku qoran yihiin 6 qodob oo ay goluhu kasoo saareen arrimaha labada dhinac u dhaxeeya, waxaana qodobo ay kala ahaayeen.
Golaha Ammaanka wuxuu tixgalinayaa Aragtida sharciga ee ah ee ay bixiyeen Ururka Qareenada Sharciga ah ee Midowga Afrika, su’aalaha ay soo jeediyeen ee la xariira Sharciga PSC, ee muranka Xaduuduhu dhanka Badda ee u dhaxeeya Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya & Jamhuuriyadda Kenya, kaas oo horyaala Maxkamadda caalamiga ah ee ICJ, ayna tixgalinayaan qaraarkaas.
Golluhu wuxuu ku amaanayaa Jamhuuriyadda Soomaaliya & Jamhuuriyadda Kenya, sida ay uga shaqeynayaan gacan ka geysashada Horumarinta Nabadda, Amniga iyo Xasiloonida Afrika, gaar ahaan geeska Afrika.
Golluhu wuxuu si adag ugu baaqayaa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya & Jamhuuriyada Kenya in ay xoojiyaan howlgalkooda, iyadoo ujeedada tahay in la helo xal-waara oo ku wajahan muranka Xaduudaha Badda,waxaana ugu baaqaynaa in ay dhinacyadu ka fogaadaan ficil kasta oo khatar galin kara deris wanaaga labada dal.
Golluhu wuxuu ka codsanayaa Gudoomiyaha Midowga Afrika in uu si dhaqso leh uga faa’iideysto Xaafiisyadiisa shaqada, Shaqsi ahaan ama magacaabid Ergay gaar ah oo la shaqeeya dhinacyada, kaas oo ujeedadiisu taahy sidii uu uga shaqeyn lahaa daganaansho nabadeed oo waara, wadatashi iyo wada shaqeyn lala yeesho arrimaha labada dal u dhaxeeya.
Goluhu wuxuu ka codsanayaa Gudoomiyaha Midowga Afrika in uu si joogto ah golaha ula wadaago warbixinada la xariira xaaladdaha labada dhinac.
Golaha Nabadda iyo Ammaanka ee Midowga Afrika wuxuu go`aansaday in uu si firfircoon uga howlgalo arrintan.
Qaraarka ka kooban lixda qodob ee kasoo baxay Golaha Ammaanka iyo Nabadda ee Midowga Afrika, waxaa ka muuqata in ay walaac ka qabaan isku dhac iyo arrimo diblumaasiyada halis ku ah oo dhexmara labada dal ee Soomaaliya & Kenya, waxaana shalay labada dalba golaha hortiisa ay isku dhaafsadeen hadalo ad-adag oo ku wajahan qadiyaddan.
Soomaaliya, waxay diiday talaabo kasta oo ku wajahneyd doonista Kenya, waxaana walaac laga qabi karaa go`aanka labada bilood dib loo dhigay, inkastoo ay shaacisay dawladda Soomaaliya in uusan mawqifkeda bedeli karin, haddana dad badan ayaa ka walaacsan.